टिकटक बनाउन माथिबाट हाम फाल्ने भाई मिडियामा आए । फेरी बस र घरको छतबाट हाम फाले । भने- कहिले कांहि सानो घाऊ चोट लागिहाल्छ नि (भिडियो हेर्नुस) – Tufan Media News
६ पुष २०७७, सोमबार १६:०१
टिकटकमै घरको छत र बसबाट जिमन्यास्टिक गरेर चर्चामा आएका गोरख तिरुवा मिडियामा आएका छन् । प्रतिभाशाली गोरख तिरुवाले प्रतिभालाई सहि सदुपयोग गर्ने ठाउँ टिकटक भएको बताउँदै आफुले प्रशिक्षण लिएरै यस्तो कार्य गर्दै दर्शकहरुको मन जित्दै आएको बताए । दुर्गम जिल्ला कालिकोटका तिरुवाले शिशिर भण्डारीको नयाँ नयाँ न्युज नेपालको अफिस भित्रै अनेक स्टण्ट र योगा देखाउँदै सबैलाई अचम्ममा पारे ।
गोरखको यहि कलालाई देखेर उनलाई एक नेपाली चलचित्रबाट पनि अफर आईसकेको छ । दुर्गम जिल्लाबाट उदाएर नेपाली चलचित्र आँधी तुफान २ मा काम गर्न लागेका मात्र १७ बर्षका गोरखसँगको कुराकानी र उनको डरलाग्दा स्टण्टहरु, हेर्नुहोस
जेठी हुँदाहुँदै कान्छीको बिहे
अन्तिम दिन भद्रकालीमा धर्ती
पुश्कल शर्मा र कुशल
के तपाई पत्याउनु हुन्छ
गायिका डिला बिक श्रीमान
११ औ दिनमा धर्ती
यिनै हुने मेयरलाई एक स’टमा ढा’ल्ने युवा
जेठी हुँदाहुँदै कान्छीको बिहे दर्ता बन्यो,विदेश बाटै श्रीमानले घर नि काला गरे (भिडियो हेर्नुस्)
यि युवा नेता जसले आफ्नै जिल्ला अध्यक्ष तथा मेयरलाई मु क्का हाने
पुश्कल शर्मा र कुशल वेलबासेले गाएको दशैं गीत युटुवमा हिट ( भिडियो )
दशैँलाई मध्यनजर गरेर भोलिदेखि नयाँ नोट साट्न पाइने
के तपाई पत्याउनु हुन्छ ? टिकटक बाट दिनमै लाखौ कामाउने अंशु बर्माको वास्तविकता के हो ? घर, घडेरी देखि कार सम्म (भिडियो हेर्नुस्)
गायिका डिला बिक श्रीमान सहित पहिलोपटक मिडियामा,अब डिलालाइ दोहोरी खेल्न नदिने भन्दै श्रीमानले पोखे गुनासो